HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bicol Cebuano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
21 MARTSA 2017
NEW YORK—Kely sisa dia ho voarara ny fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia. Tian’ny Vavolombelon’i Jehovah àry ny hanoratra mivantana any amin’ireo olona ambony ao amin’ny fitondrana sy ao amin’ny Fitsarana Tampony any. Asain’ny Filan-kevi-pitantanana handray anjara amin’io ezaka manokana io ireo Vavolombelona 8 000 000 mahery eran-tany.
Nametraka fitoriana tany amin’ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia ny Ministeran’ny Fitsarana tamin’ny 15 Martsa 2017. Nampangainy ho mampidi-doza mantsy ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia ka tokony hofoanana, ary tokony horarana ny asany. Raha eken’ny Fitsarana Tampony ilay fiampangana, dia hakatona io foibe any akaikin’i Saint-Pétersbourg io. Hofoanana koa ny Fikambanana Ara-pivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah miisa 400 eo ho eo. Hoheverina ho mpandika lalàna koa ireo fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah miisa 2 300 mahery eran’i Rosia. Ho azon’ny Fanjakana alaina ny biraon’ny sampana sy ireo toeram-pivavahan’ny Vavolombelona eran’ilay tany. Ho azo samborina sy torina any amin’ny fitsarana koa izay Vavolombelon’i Jehovah manaraka ny fivavahany. Amin’ny 5 Aprily no tokony hamoaka didim-pitsarana momba izany ilay Fitsarana Tampony.
Hoy i David Semonian, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny foibeny eran-tany: “Te hisarika ny sain’ny rehetra ho amin’izao toe-javatra mampalahelo izao ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Olom-pirenena tsy tia herisetra sady mpankatò lalàna ny Vavolombelona. Ampangaina ho mampidi-doza anefa izy ireo satria, hono, anisan’ny fikambanana lazain’ny lalàna hoe mahery fihetsika. Tena tsy marim-pototra ny antony anenjehana azy ireo.”
Efa nanao ezaka manokana hoatr’izany ny Vavolombelona, taloha. Nanoratra tany amin’ny olona ambony tao amin’ny fitondrana tany Rosia, ohatra, izy ireo, efa ho 20 taona lasa izay, satria nanoso-potaka azy ireo ny sasany tamin’ireny olona ambony ireny. Efa nanoratra tany amin’ny manam-pahefana tany an-tany hafa koa izy ireo, anisan’izany i Jordania, Korea, ary Malawi, ka nangataka mba tsy henjehina intsony ny Vavolombelona tany.
Hoy koa Atoa Semonian: “Tsy azo lazaina hoe heloka bevava mihitsy ny hoe miaraka mamaky Baiboly, mihira ary mivavaka. Antenainay fa hisakana an’ilay fandrarana tsy ara-drariny ny manam-pahefana any Rosia, rehefa mahazo an’ireo taratasy maro be avy amin’ireo mpiara-mivavaka aminay eran-tany.”
Toromarika Momba An’ilay Ezaka Manokana
Raha tianao ny handray anjara amin’ilay ezaka manokana, dia sokafy ilay rohy eo ambany. Ho hitanao ao ny toromarika momba ilay izy, sy ireo adiresy azonao andefasana an’ireo taratasy.
Rosia: Yaroslav Sivulskiy, +7-812-702-2691